May | 2009 | Mg Ogga's Notes | Page 2
ကဆုန်လပြည်.နေအထိမ်းအမှတ် အဖြစ်ရေးပါတယ်။ လောကမှာအများစုဟာ အညတရတွေပါ ထူခြားတဲ့ဝိသေသပုဂ္ဂိုလ်တွေရှားပါပါတယ်။ထူခြားတဲ့ဝိသေသပုဂ္ဂိုလ်တွေကို တွေကိုကြည်ညိုဂရုစိုက်တာ ဟာ တစ်သီးပုဂ္ဂိုလဆန်ပါတယ်။ အညတရများကို ဂရုစိုက်တာ ဟာလောကအကျိုးသယ်ပိုးရာရောက်ပါတယ် လောကထဲ ကိုယ်ပါ ပါဝင်တာမို. ကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးများ ပါတယ်။ ဒေသနာထဲမှာ `သဒိသံ ပါကံ ဇနေတိ´လိုဆိုပါတယ်မိမိပြုတဲ့အလုပ်အတိုင် ပြန်အကျိုးပေးပါတယ်။ဒီအတိုင်းပါပဲ ကျနော်တို.တွေ သံသရာမှာ ကျင်လည်တာ အညတရအဖြစ်ကျင်လည်တာများပါတယ်။ အညတရများကို ဂရုစိုက်မှသာ သံသရာမှာ ကျနော်တို.အညတရအဖြစ် ကျင်လည်စဉ် ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်မယ်သူရိုပါမယ်။ အညတရ များမှာ နေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ် ဒါကြောင့်သူတို.အပေါ် အခက်အခဲမရှိ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနိုင်ပါမယ်။၀ိသေသပုဂ္ဂိုလ်များမှာ လောကတွင်ရှားပါ သဖြင့် ကုသိုလ်ပြုရန် မလွယ်ပါ။အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ် ရွှေးချယ်လှူခြင်းသည် ပါရမီမြောက်သောဒါန မဟုတ်ပါ။ ဘုရားအလောင်းဖြစ်သည် ဝေဿန္တရာမင်းကြီးသည် ဇူစကာ ပုဏ္ဏားလို. လူမျိုးကို ပင် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူပေးလှူနိုင်ပါတယ်။ အညတရများအပေါ် ကြည်ညိုစိတ်ရှိရင်…
May 8, 2009 in ဘာသာရေးရာ.
Wave မဂ္ဂဇင်း၃နှစ်စာE-books တွေရပြီ
မနေ.ကအင်းဝစာအုပ်ဆိုင်မှာ ကမ္ဘာအရေး၊Globalizationအကြောင်းတွေအများဆုံးရေးတဲ့ ဆရာကျော်ဝင်းတို.ရဲ့wave မဂ္ဂဇင်း၃နှစ်စာလောက်ကို တစုတစည်းတည်းစုပြီ ebookလုပ်ထားတဲ့ CD လေးတွေ.လို.၀ယ်လိုက်တယ် တထောင်ပဲပေးရတယ်။ စုစုစည်းစည်းဖတ်ချင်သူအတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့။ကျနော်ကြိုက်တဲ့ စံပယ်ဖြုကိုလည်း ဒီလို. လုပ်ပေးရင်ကောင်းမယ်။wave က ထွက်တချက်မထွက်ဆို.တော တစ်နှစ်ကို ၁၂အုပ်တော့မဟုတ်ဘူး ထွက်သလောက်ပေါ.လိုချင်ရင် ဒီမှာယူလို.ရသဗျ။ Wave မဂ္ဂဇင်း အောင်မြင်ပါစေ။ ဆရာကျော်ဝင်းရေကြော်ညာပေးတယ်နော်မုန့်ကျွေးရမယ်ဗျ 😉 လိုချင်ရင်ယူနော်ဒီမှာရှိတယ်။
May 1, 2009 in သတင်း.
အင်းဘာလိုလိုနဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်သွားတာ တစ်နှစ်ပြည့်ပြီ သေကျေအပျက်အဆီးကြားထဲမှာ ဧရာဝတီတိုင်းသားတွေအတွက်စိတ်ပျက်ခြောက်ခြားစရာတွေ ကြုံခဲ့ရပြီ။အခုလိုရာသီ ဥတုတွေဖောက်ပြန် နေအောင် လူတွေလုပ်နေကြတယ်။တချို.ကပြောတယ် ပိတောက်တွေတောင် သစ္စာမရှိတော့ဘူးတဲ့ တကယ်သစ္စာမရှိတာ လူတွေပါ။စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ သစ်ပင်တွေခုတ်ကြတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ မုန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ.တွေနင်းကန်ထုတ်နေကြတယ်။မြေကမ္ဘာကိုချစ်တယ် ချစ်တယ်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေထုတ်ယူစားသုံးကြတာ ကမ္ဘာကြီးလည်း နာမကျန်းဖြစ်နေပြီ။စိမ်းမြရောင်မြေကမ္ဘာဟာ နီကျင်ကျင် အင်္ဂါဂြိုလ်လို.ဖြစ်တော့မှာ စိုးရမ်ရမယ်ထင်ပါရဲ့။ကမ္ဘာကြီးကိုအရိပ်ပေးတဲ့ထီးလိုကာကွယ် ပေးတဲ့စိမ်းစိုစိုသစ်တောတွေ ကောင်းကင်ပေါ်က တိမ်ပြာပြာ မိုးသားတိမ်တိုက်တွေအိုဇုန်းလို့ ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာကိုကာကွယ်တဲ့ ဓာတ်သားအလွှာပြင်ကြီးတွေ ဒါတွေဒါတွေ ပျက်စီးအောင်လူတွေလုပ်နေကြတယ်။ နာဂစ်မှာလဲကုန်တဲ့ သစ်ပင်တွေပြိုလဲအပင်တွေ အစား ပြန်အစားတိုးစိုက်နေတာ ပလတ်စတစ်တိုက် ဖျက်ရေးအစီအစဉ် တွေ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်းတွေအရင် ထက်အများကြီး ပေါ်လာတာကြားတော့
May 1, 2009 in သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ.